Shandong Huiyang Industry Co., Ltd. ndeye FSC yakasimbiswa mugadziri wakavambwa muna 2003, anonyanya kuita tsvagiridzo, kusimudzira, kugadzira, kutengesa uye sevhisi yemarudzi ese ehuni bhokisi, huni hunyanzvi, tireyi yehuni, kushongedza kwehuni kwezororo uye fenicha yehuni.Inowanikwa muJinan ine nyore yekufambisa yekupinda.Yakazvitsaurira kune yakasimba kutonga kwemhando uye nekufunga kwesevhisi yevatengi, vashandi vedu vane ruzivo vanogara varipo kuti vakurukure zvaunoda uye ive nechokwadi chekugutsikana kwevatengi.
''Hunhu hwepamusoro ndiko kuita kwedu tisinganeti.Matanho matatu emhando yekuongorora maitiro anogona kukuvimbisa iwe premium mhando zvigadzirwa uye nekukurumidza kuendesa nepamusoro uye yakagadzikana chigadzirwa.
Mumakore achangopfuura, kambani yedu yakaunza nhevedzano yezvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinosanganisira Sawing machine, Press planer, Diki-scale polishing machine, Pressing machine, Polishing machine, Four side planer, Double end saw, Multiple blade saw, Sewing machine, Laser engraving machine. , Pepa rekucheka muchina, Heat press machine, Stoving machine, Printing machine, Carton processing machine.
Pamusoro pezvo, takawana chitupa cheFSC kuti tive nechokwadi chekuti zvinhu zvedu zvese zvehuni zvinoteedzera.Isu tine zvakare EN71, LFGB, CARB.Chitupa cheFDA kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvehuni zvakachengeteka.Zvigadzirwa zvedu zvemapuranga zviri kutengesa zvakanaka kwese kuChina uye zvakare kutengeswa kuNorth America, South America, Europe, Middle East, Asia, South Africa neOceania!
Chikwata chedu chedhizaini chinobatsira vatengi kutendeutsa zano rakanaka rive rakajeka hunyanzvi.Isu tinogadzira nekugadzira fashoni, inoyevedza, yakasiyana mhizha.
Isu tinogamuchirawo OEM uye ODM maodha.Kungave kusarudza chigadzirwa chazvino kubva kukhathalogi yedu kana kutsvaga rubatsiro rweinjiniya pachishandiso chako, unogona kutaura kune yedu yevatengi sevhisi nzvimbo nezve zvaunoda kutsvaga.
Isu tiri kutungamira fekitori pamapuranga emapuranga anopfuura makore gumi.Isu tinopa MAHARA Dhizaini, tsigiro yeOEM, Yakaderera MOQ, Kurumidza Kuendesa, Yemahara Samples uye Door kune Door sevhisi.
Isu tiri mutengesi wako uye shamwari muChina yemhando yemapuranga bhokisi uye mhizha.Kugamuchirwa kushanyira fekitari yedu.Ndatenda!